Qaar ka mid ah cuqaasha iyo salaadiinta dhaqanka ee gobolka Mudug oo baaq nabadayn iyo tacsiyey iskugu jira ka soo saaray colaadda Cagaarre. – Radio Daljir
Qaar ka mid ah cuqaasha iyo salaadiinta dhaqanka ee gobolka Mudug oo baaq nabadayn iyo tacsiyey iskugu jira ka soo saaray colaadda Cagaarre.
Maajo 6, 2010 12:00 b 0
Galkacyo May 06 – Kulan nabadeed oo ay in muddo ah u fadhiyeen Qaar ka mid ah Salaadiinta iyo cuqaashada dhaqanka ee gobolka Mudug ayaa maanta laga soo saaray baaq nabadeed oo ku aaddan xiisaddii colaadeed ka dhacaday deegaan Cagaarre bishii aynu soo dhaafnay.
Cuqaasha iyo salaadiinta dhaqanka ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa baaqoodu iskugu jiray nabadayn iyo tacsiyeen ku saabsanayd dhibaatadii colaadeed ee dhawaan ka dhacday deegaanka Cagaarre ee is-maamulka Soomaalida Ethiopia, taasi oo xurguftii ugu danbaysay ay ku nafwaayeen illaa 5 ruux halka tiro kalana ay ku dhaawacmeen.
Salaadiinta dhaqanka ee gobolka Mudug ayaa baaqooda maanta rugni uga dhigay sidii looga buskoon lahaa xurfugtaas colaadeed iyagoo sheegay dhammaanba wixii dhacay in ay dusha u riteen wax qaybteeda, maadama kooxihii weererka ugu danbeyey gaystay ay haayeen kuwo ku abtirsada gobolka Mudug.
Caaqil C/wahaab Maxamuud Guray, oo ku hadlayey magaca cuqaasha baaqa soo saaray isla markaana isagu maanta baaqaasi saxaafadda u akhriyey ayaa sheegay marka ugu horraysa in ay u tacsiyeynayaan dhammaanba dadkii ku dhintay dhacadadaasi weerer iyo kuwii ku dhaawacmayba.
Caaqilku, waxaa uu dhanka kale sheegay in ay hadda kaddib go’aamiyeen in aan mar danbe aysan dhicin gacan danbe oo ka timaadda dadka ay madaxda dhaqanka u yihiin, isagoo sheegay in ay ku tallaabsadeen qorshe kasta oo wax lagu xakamayn karo, waxana sidoo kale sheegay in ay diyaar u yihiin waxkasta oo xoojin kara wanaagga iyo walaaltinimada dadyawga ah wax kala gaareen.
Xurgufta colaadeed ee maanta cuqaashu iyo salaadiinta dhaqanku ay baaqa ka soo saareen ayaa ahaa mid in muddo ahba soo jiitamayey, waxaana hadda ka hor deegaankaasi Cagaarre ka dhacay dilal kala duwan oo iskugu jiray gaadmo iyo weerar ka fool ka fool ah.
Dr. Jimcaale, wasiirka dastuurka & arrimaha federaalka ee Puntland oo booqasho hawleed uga bilaabatay Maraykanka.